Internet Download Manager (IDM) v 6.25 Build 14 Final + Patch Full 1000% Workind ! ~ ဘလော့ခရီးသည်
Internet Download Manager (IDM) v 6.25 Build 14 Final + Patch Full 1000% Workind !
Internet Download Manager ဆိုတာ ကွန်ပျုတာကို သုံးစွဲ့နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရာလေးပါ ။ Update ထွက်တိုင်း တင်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ Internet Download Manager ရဲ့ နောက်ဆုံး ဗားရှင်းInternet Download Manager (IDM) v 6.25 Build 14 အသစ်လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Full Version အဖြစ် အမြဲတမ်း အသုံးပြုလို့ရအောင်လို့လည်း ဒေါင်းလင့်ဖိုင်ထဲ့မှာ Keygen
Support လုပ်ပါတယ်...လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကတော့ အောက်က လင့်မှာ ဝင်ရောက် ရယူနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။